၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလ အတွက် FORD MOTOR COMPANY ရဲ့ ရောင်းချနိုင်မှုရလဒ်အချို့ – AutoMyanmar
၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလ အတွက် FORD MOTOR COMPANY ရဲ့ ရောင်းချနိုင်မှုရလဒ်အချို့
Date: December 29, 2017 0
Ford Motor Company အနေနဲ့ ဒီဇင်ဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့ ရောင်းချနိုင်မှုရလဒ်ကိုတော့ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလမှာ ထုတ်ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်အနေနဲ့ကတော့ နံနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ် EST(Eastern Time) ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၀ နာရီ EST မှာတော့ Ford ရဲ့ Sales Analyst ဖြစ်တဲ့ Erich Merkle ဆိုသူက Conference Call ကိုကြီးမှူးပြီးစတင်ကျင်းပမှာပါ။ Conference Call မှာ News Media တွေပါတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီး Company ရဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ရောင်းချနိုင်မှုရလဒ်သာမက မာကတ်မှာ Trend ဖြစ်နေတဲ့ ဟာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Toll Free: 1-877-870-8664
Password: “Ford Monthly Sales Call”
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ ပွဲကိုတိုက်ရိုက်သွားစရာ မလိုပဲ live stream ကြည့်နိုင်ဖို့ access information ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သွားရောက် ပြီးကြည့်ရှု့ရမယ့် ဝက်ဆိုဒ်ကတော့ www.shareholder.ford.com. ဖြစ်ပါတယ်။
Replays – Available after 12:45 p.m. EST the day of the event through January 10, 2018
Toll Free: 1-855-859-2056 or 1-800-585-8367
Live stream မကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Information ကိုအသုံးချရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Replay ပြန်ကြည့်နိုင်မယ့်အချိန်ကတော့ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့ ည ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ် EST အချိန်ကျော်မှ ကြည့်ရှု့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်သွားကြည့်နိုင်မယ့်နေရာကတော့ အပေါ်ကအတိုင်းပဲ www.shareholder.ford.com. ဆိုတဲ့ ဝက်ဆိုဒ်ကပါပဲ။ FORD MOTOR COMPANY ကနေထွက်ရှိထားတဲ့ ကားတွေကို စီးနေကျ Customer တွေဆိုရင်တော့ ဒီ သတင်းကို စိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။
Conference Call မှာ Company ရဲ့ ရောင်းချနိုင်မှုရလဒ်သာမက တခြားအကျိုးရှိစေတာလည်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် ကြည့်လိုက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ အကျိုးယုတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။